in 1 /6pages.Total 169 list items
ထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်ရန်ကန့်သတ်ချက်များ စာရင်း (0225)
【2လ24ရက်နောက်ဆုံးသတင်း】တောင်ကိုရီးယားခရီးသွားကပ်ရောဂါ တတိယဆင့်သတိပေးချက်အဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကြံပြုသည်မှာ 「2019 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19)」ကပ်ရောဂါနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက် လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်မှုအစီအမံ
ထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်ရန်ကန့်သတ်ချက်များ စာရင်း (0214)
2လ 6ရက်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံအားလုံး(ဟောင်ကောင်၊ မကာအိုအပါအဝင်)ဒုတိယဆင့် ကပ်ရောဂါဒေသစာရင်းသွင်းသည်၊ တရုတ်ပြည်နယ်၊မြို့အသီးသီးတွင်နေထိုင်သူများ ပြည်ဝင်ခွင့်ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
(109)ခုနှစ် 2လ 7ရက်မှစ၍ 14ရက်တွင်းဝင်ရောက်(သို့)နေထိုင်ခဲ့ကြသောပြည်မကြီး နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ဗီဇာထိန်းချုပ်မှုအစီ အမံများကိုဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
2လ 5ရက်မှစ၍ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်အားဒုတိယဆင့်ကပ်ရောဂါဒေသအဖြစ်သတ်မှတ် သည်၊ ခရီးသွားသမိုင်းရှိသူသည် ဝင်ရောက်ပြီးနောက်အိမ်တွင်ရောဂါခြေချုပ်ဖို့လိုသည်။
ဝိန်းကျိုးမြို့ကိုဒုတိယဆင့်ကပ်ရောဂါဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ပြည်သူများ ခရီးသွားသမိုင်း ရှိသူများအိမ်တွင်ရောဂါခြေချုပ်ရန်လိုအပ်သည်
တရုတ်ပြည်မကြီးကွမ်တုံပြည်နယ်တွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါသစ်ဆက်တိုက်မြှင့် တက်လာမှုကို တုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဗဟိုကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးဌာနက မနက်ဖြန်မှစ၍ ဒုတိယ ဆင့်ကပ်ရောဂါဒေသတွင်ထည့်သွင်းမည်၊ ဝင်ထွက်သည့်ပြည်သူများကွမ်တုံခရီးသွားသမိုင်းရှိပါက အိမ်တွင် ရောဂါခြေချုပ်ထားဖို့လိုသည်။
တရုတ်ပြည်မကြီး၏ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါသစ်ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဗဟို ကူးစက်ရောဂါဌာနချုပ်မှ ထိုင်ဝမ်သို့လာမည့်ပြည်မကြီးပြည်သူများကိုကန့်သတ်ထားသည်။
တရုတ်ပြည်မကြီးဝူဟန့်တွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါဆက်လက်ဖြစ်ပွားသည်ကို အတည်ပြုခဲ့သည်၊ဝူဟန့်နှင့်အနီးအနားရှိဒေသများသို့သွားလာသူများအား မိမိကိုယ်တိုင် ကာကွယ်မှုအစီအမံများနှင့်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပိုမိုအားကောင်းစေရန်တိုက်တွန်းပါ
နိုင်ငံခြားထွက်လျှင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မငြိ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှနွေဦးရာသီပွဲတော် ရှင်းလင်းရေး 566 အစီအစဉ်ကိုစတင်ခြင်း
【သုံးစွဲသူကာကွယ်ရေးအကြောင်းအရာ】 သုံးစွဲသူအခွင့်အရေးကိုဂရုပြုပါ၊ ကာကွယ်ရေးလိုင်းကို သတိရပါ။
အင်ဒိုနီးရှားတွင်ဦးဆုံးအာဖရိကဝက်နာဖြစ်ပွားမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်၊12လ13ရက်မွန်း လွှဲ2နာရီမှစ၍ အင်ဒိုနီးရှားမှတားမြစ်ဝက်သားထုတ်ကုန်သယ်လာသည့် ခရီးသည်များကို ဖမ်းဆီးရမိပြီး ထိုင်ဝမ်ငွေ20သောင်းဒဏ်ချခဲ့သည်။
【လိမ်လည်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဓိကအကြောင်းအရာ】ကိုဂရုပြုပါ!! ပိုအေးဆေးတည်ငြိမ် စွာ လိမ်လည်မှုလျော့နည်းအောင် သင်နဲ့ငါအတူတကွ လိမ်မည်မှုကို တားဆီးပါ။
ဖိန်လိကွန်ယက်【ဝေရှောက်ထိုင်ဝမ်ဟောင်ကြားကျိုက်】လှုပ်ရှားမှုစတင်! အမြန်လာ၍ သင့်ရဲ့လှပသောအပြုံးကို မျှဝေကြပါစို့!
အရှေ့တောင်အာရှ အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျားရောဂါပြန့်ပွားမှုတုန့်ပြန်၊ ဖိလစ်ပိုင်မှရောက်ရှိလာသောခရီးသည် လက်ဆွဲပစ္စည်းများကိုပြည့်စုံ စွာစစ်ဆေးခြင်း
【ထိုင်ဝမ်ပုံပြင်သစ်】မက္ကစီကိုဘောလုံးနည်းပြရဲ့ခိုင်မာမှု！ကလေးများကိုပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးမရှိ၊ ပိုကောင်းတာပဲရှိ
【ထိုင်ဝမ်က ပုံပြင်သစ်】ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ်ရှောင်ထောင်：ကျမသည်ထိုင်ဝမ်လူမျိုး၊ ဗီယက်နမ် လူမျိုး လည်းဖြစ်သည်။ မိသားစုရှိသောနေရာသည်အိမ်ဖြစ်သည်။
內政部移民署 / 2019/5/20
【မိခင်များနေ့ 7နိုင်ငံနှုတ်ခွန်းဆက်အသံကဒ်】ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။!
National Immigration Agency, Ministry of the Interior / 2019/2/22
ဒိတျလှနျရပျနား(နထေိုငျ)သော နိုငျငံခွားသားမြားသညျ မိမိကိုယျတိုငျ သှားရောကျဝနျခံပါက ဖမျးခွငျး၊ ဒဏျငှပေေးဆောငျခွငျးအားလုံး ကငျးလှတျခှငျ့ ရရှိမညျ။
National Immigration Agency, Ministry of the Interior / 2019/2/18
“အိမျထောငျရေးကဏ်ဍ” ပြျောရှငျသောအိမျထောငျရေးကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးခွငျး
ပွညျတှငျးသို့ဝငျရောကျလာသော ခရီးသှား၏ပါဆယျတှငျ အမွဲတှရေ့လရှေိ့သော အပငျ၊ တိရစ်ဆာနျမြား သို့မဟုတျ ထိုကုနျပစ်စညျးမြား၏ ရောဂါမပြံ့နှံ့အောငျကာဆီးတားခွငျးဆိုငျရာစညျးမဉျြးမြား၏ ကိုးကားမှုဇယား
နှဈသဈကူးအားလပျရကျတှငျ ပွညျပသို့ ခရီးသှားသူမြား အသားလုပျထုတျကုနျမြားကို ပွညျတှငျးသို့ မသယျလာကွရနျ သတိပေးပါသညျ။
“ဆေးဘကျဆိုငျရာကဏ်ဍ” သကျကွီးရှယျအိုမြား၏ကနျြးမာရေးနှငျ့ဆေးဘကျဆိုငျရာ ကူညီထောကျပံ့မှုဖွငျ့ ၎င်းငျးတို့၏နထေိုငျမှုအရညျအသှေးကို ကောငျးမှနျတိုးတကျစသေညျ။